Ergadii ka qeyb-galeysay shirka Jowhar oo isaga baxay hoolkii uu shirka ka soconaayay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ergadii ka qeyb-galeysay shirka Jowhar oo isaga baxay hoolkii uu shirka ka soconaayay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ergadii ka qeyb-galeysay shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ay isaga baxeen hoolka shirka ka soconaayay.
Ergadaasi oo tiro ahaan gaaraya ilaa 300 qof, ayaa sida la sheegay ku kala dareeray hoolka shirka, kadib markii ay ka war-heleen inaysan laheyn wax xuquuq lacageed ah oo ay ku qaadanayaan ergonimadda, ayna howshoodu tahay inay ansixiyaan calanka, magaca iyo dastuurka maamulkaas loo sameynayo.
Warar hoose oo aynu kasoo xiganay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ergada shirka aysan laheyn xuquuq lacageed oo ka baxsan jiif iyo cunto, waxayna arrintaasi keentay inay shirka ka baxaan oo sidaasi lagu soo xiro fadhigii koowaad ee ergada shirka.
Qaar kamid ah ergadii shirka ka qeyb galeysay oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u xaqiijiyay in shirka ay gebi-ahaantiisa isaga baxeen islamarkaana ay dib ugu laaban doonaan deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen.
Dhinaca kale, madax katirsan urur goboleedka IGAD oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa durba bilaabay dadaalo ay ku xalinayaan ergada maanta shirka ka baxday, waxa ayna wada-hadalo la leeyihiin ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka ee shirka ka qeyb galaya.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay hore uga biyo diideen ka qeyb-galka shirkaasi Jowhar, oo maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo haatan u muuqda mid fashilmay.